Ndwendwela ipaki yendalo yaseNacedero del Urederra eNavarra | Iindaba Zokuhamba
Ukuba ikhefu lethu liquka ukubaleka okuncinci, kufuneka sazi ukuba kufutshane nasekhaya sinokufumana iindawo ezintle ngokwenene. Eli xesha siza kuthetha ngalo INacedero del Urederra, indawo yendalo ebekwe eNavarra. Igama lalo livela kwi-Basque, ure-derra, oko kuthetha ukuba amanzi amnandi, ukuze sikwazi ukufumana umbono wento esiza kuyifumana.
Lo Indawo yendalo yipaki ekhuselweyo Apho ungathatha khona indlela enkulu yokuxabisa amadike amanzi endalo anokukhuphisana neelwandle ezintle ngokubhekiselele kumanzi acwebezelayo acwengileyo. Olu luphawu olukhulu lokubaleka ukwenza njengesibini, kunye nabahlobo okanye usapho, ukonwabela ngokupheleleyo indawo zendalo eziphuphileyo esikufutshane kakhulu.
1 Ufika njani eNacedero del Urederra
2 Iingcebiso zokwenza indlela
3 Umthombo weUrederra
4 Indawo engqongileyo
Ufika njani eNacedero del Urederra
Le paki yendalo ikwindawo ekungenwa kuyo Ipaki yendalo yase-Urbasa-Andía. Ukusuka kwidolophu yase-Estella ngendlela eya eLogroño, i-A-18, ufika kwidolophu yaseBaquedano nge-NA-718. Emnyango wedolophu nakwindawo ehla kuyo yindawo yokupaka ipaki yendalo. Ngokwesiqhelo kufuneka uhlawule ixabiso elincinci ukushiya imoto kwindawo yokupaka. Ayisiyo mali ininzi kwaye kufuneka ithathelwe ingqalelo ukuba iipaka zendalo zifuna ukulungiswa, ke kuyinto eqhelekileyo ukubiza izinto ezithile ezinjengokushiya imoto kwindawo yokupaka. Gcina ukhumbula ukuba ihlawuliswa ngemoto nganye hayi ngomntu ngamnye, nto leyo eyenza izinto zibe lula kuthi.
Iingcebiso zokwenza indlela
Le ndlela inde kakhulu ke kuyacetyiswa kwiintsapho ezinabantwana abanokukwazi ukuhamba imigama emide. Ngaphandle koko kunokwenzeka ukonwabela ezinye iindawo ezikufutshane nendawo yokupaka iimoto kodwa ungayenzi yonke indlela. Kubalulekile ukuhamba kwindawo ekhonjisiweyo kwaye ungaphumi ngaphandle ukuze ungonakalisi iindawo zendalo, ngakumbi kwiindawo ezikhuselweyo ezibiyelweyo. Kananjalo inkunkuma okanye iinkozo zemali aziyi kuphoswa kwiindawo zamanzi njengoko zisenzakalisa indalo. Awunakho ukuthatha izityalo okanye amatye okanye nayiphi na into. Le yimigaqo esisiseko yayo nayiphi na ipaki yendalo kodwa kufuneka siyikhumbule ngakumbi ukuba sihamba nabantwana. Sisonke, kufuneka sikhathalele ezi ndawo ukuze wonke umntu azonwabele.
Ipaki yabhengezwa Ugcino lwendalo ngo-1987 kwaye uqala ukusuka edolophini yaseBaquedano ukwenza iindlela zokunyuka. Kuya kufuneka uyazi ukuba inesikhundla esilinganiselweyo sabantu abangama-450. Kungcono ukutyelela indawo yogcino ngexesha lasentwasahlobo, zombini ngenxa yamaqondo obushushu kunye neendawo ezihle kakhulu. Amanzi ngexesha lobusika ngalawo anyibilikayo eendawo ezinekhephu kwaye umbala awukho mhle kwaye uyikristalli njengasentwasahlobo okanye ehlotyeni, kwaye loo nto ayithethi ngamaqondo obushushu asezantsi ale ndawo. Ngokuchasene nathi sinenyani yokuba kwezi nyanga ukunyuka kwabantu kukhulu kakhulu. Ukuba sihamba ngexesha eliphezulu sinokugcina amatikiti ethu kwiwebhusayithi yepaki yendalo.
Indlela yeNacedero ihlala ngaphezulu okanye ngaphantsi iyure enesiqingatha ukunyukanjengoko kuthatha ixesha elide, nangona ukunyuka kungenzima kangako. Umntu onemilo eqhelekileyo angayenza ngokugqibeleleyo kwaye nakwiintsapho. Njengoluhambo olude kwipaka yendalo, baye babona kwangaphambili kwaye babeke ezinye iindawo zokuphumla ngabondli. Kuya kufuneka uqokelele yonke into xa ushiya, kuya kufuneka ucace gca ngaloo nto. Kungenxa yoko le ndlela iyindlela efanelekileyo yokuqala kusasa kwaye uyeke isidlo sasemini kwindawo yepikniki. Endleleni ungonwabela indawo yendalo eneembono zeentaba kunye namachibi ahlukeneyo athi, ewe, anamanzi abandayo kakhulu, ke kungcono usiphephe isilingo sokubeka iinyawo zakho kuzo. Uhambo olubuyayo luyehla ngoko ke kuya kuthatha iyure. Kufuneka sihlale sikhumbula ukuba ayisiyondlela setyhula leyo kuya kufuneka sishiye ixesha lokujika. Sitsho kuba ipaki ivalwa ngo-17: 30 emva kwemini kwaye kufuneka sibuye.
Njengoko ivala kwakusasa, le ntwasahlobo inokuba yindawo yokubaleka apho unokuthatha ithuba lokubona indawo engqongileyo okanye ume kwindawo yokutyela ukuzama ukutya okucebileyo kweNavarrese. Inkqubo ye- I-Asador Alai Taberna ikwindawo ye-Eulate kwaye kuyo unokufumana izitya ezimnandi zenyama kunye nentlanzi eyosiweyo. Enye indawo yokumisa iya kuba yi-Asador Astarriaga e-Estella okanye kwindawo yokutyela yaseMendipe eGaldeano. Ngokumalunga nokuhlala kwindawo engqongileyo kukho intwana yayo yonke into, ukusuka kwiihostele ezilula ukuya kwiihotele ezintle. IPalacio dos Olivos yindawo entle ejikelezwe ziigadi kwaye kukho ezinye ezinje ngeYerri yehotele ebonelela ngezinto ezintle. IChapitel Inn yindawo yesitayile yemveli yokonwabela indawo enesitayile.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » ngokubanzi » Ndwendwela umthombo weUrederra
ICala Mitjana, indawo ekuya kuyo ehlotyeni